Xisbiyada mucaaradka qaar oo dacwad culus u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Xisbiyada mucaaradka qaar oo dacwad culus u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka
Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka ayaa dacwad quseysa sharciga doorashooyinka oo ay meel-mariyeey xiildhibaanada labada aqal, sidoo kalena uu saxiixay Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) maxkamadda sare ee dalka.
Xildhibaan Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee BFS, sidoo kalena ka mid ah hoggaanada xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira ayaa warbaahinta u sheegtay in dacwad la xiriirta sharcigaasi ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka.
Fowsiya oo mar soo noqotay Ra’iisul wasaare ku xigeen xillihii dowladdii, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku dhufatay in qodobada qaar ee sharciga doorashooyinka qaranka ay ka soo horjeedaan dastuurka iyo shuruucda dalka, sida ay hadalka u dhigtay.
Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in lagu deg-degay ansixintiisa, islamarkaana looga faa’iideystay baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dano gaar ah laga leeyahay.
Ugu dambeyn Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa xustay inay muhiim tahay in la ilaaliyo dastuurka KMG ah ee heshiiska lagu yahay inta laga dhameystirayo.
Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo haatan diyaar-garow loogu jiro qabsoomida doorashooyinka 2020/2021-ka oo walaac ay ka muujinayaan xubnaha mucaaradka.
Previous articleHeshiis lagu maalgelinayo ganacsatada yar-yar oo Muqdisho lagu kala saxiixday
Next articleCiidamada Booliska Gobalka Bari Oo gacanta ku dhigay dad ka ganacsanayay jarista dhuxusha